Nabadeey, waxaanu nahay Cadent. Waxaanu leenahay, ku shaqaynaa oo haynaa shabakada qaybinta gaaska ugu wayn Ingiriiska, anagoo siinayna macaamiishayda tamarta ay u baahan yihiin si ay badbaado ugu joogaan, u diiranaadaan oo ugu xidhnaadaan.
Haddii aad uriso gaasta ama aad aragto calaamadaha kaarboonka mono ogsaydhka na soo wac bilaash khadka 0800 111 999.*
*Dhammaan wicitaanka la diiwaan geliyey oo waa laga warhayn karaa
Ma heli kartaa taageerada dheeraadka ah ee gurmadka gaasta?
Diiwaanka Adeegyada Ahmiyada ah waxya caawiyaan shirkadaha tamarka sideeno oo kal waxay daryeelaan macaamiisha kuwaas oo leh wada xidhiidhka dheeraadka ah, gaadhid aiyo baahiyaha badbaadada.
Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan booqo cadentgas.com/psr
Dhammaan su'aalaha kale Na soo wac: 0800 389 8000
IImayl noogu soo dir: wecare@cadentgas.com
Waxa la heli karaa fiidiyowga oo ciwaan hoosaadyo ku qoran (Somali).
Waxaad furi kartaa ciwaan-hoosaadka adigoo gujinaya sumadda CC ee ku taalla xagga hoose ee fiidiyowga Youtube-ka.
Buuxinta godadka dariiqaaga
Buuxinta godadka hantidaada
Bedelidda Dhuumaha Waaweyn
U qodidda si nabdoon